Surfside Studio- 2 min ukuhamba ukuya elunxwemeni - I-Airbnb
Surfside Studio- 2 min ukuhamba ukuya elunxwemeni
Playa Carmen, Santa Teresa, Cobano, Puntarenas, Costa Rica
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uSarah iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le yindlu yesitudiyo exhotyiswe ngokupheleleyo ilungele abahambi bodwa, izibini ezitshatileyo kunye nabantwana. Le ndlu inebhedi entsha yobukhulu obutofotofo obuyinkosi enelinen zomqhaphu ukuze ukhululeke. Kukho iifestile ezinkulu ezineefestile ezimnyama zokulala. Isitudiyo sinombono ovulekileyo onebhedi ekhululekileyo yokuphumla okanye ukubukela iTV. I-TV yi-smart TV onokuyisebenzisa ukusasaza kwiakhawunti yakho yeNetflix okanye ubukele umabonakude wasekhaya. Ikhitshi inesitovu sokutshisa esi-4, ifriji
Indawo yanamhlanje kwaye ilula, yenziwe ukuba ikhululeke kwaye ibe nesitayile ngaxeshanye.
4.85 out of 5 stars from 131 reviews
4.85 · Izimvo eziyi-131
Le ndlu ikwindawo ephambili njengoko ilungile kumbindi wedolophu. Sihamba malunga nomzuzu om-1 ukuya kulwandle oludumileyo kunye nendawo ye-surf e-Playa Carmen. Kwisithuba seemitha ezingama-50 kwisakhiwo sethu sineevenkile ezinkulu, iibhanki, iindawo zokubhaka, iindawo zokutyela, iivenkile zekofu, iivenkile zokusefa kunye nerenti ye-atv.
Ndonwabile ukunceda iindwendwe zethu ngazo naziphi na iimfuno ezinazo, ndifumaneka ngo-whatsapp imini yonke, kwaye ndihlala ndikwiofisi yethu kwisakhiwo sezindlu ngexesha lasemini. Ndiyakwazi ukucebisa imisebenzi kwindawo kwaye ndilungiselele naluphi na ugcino onokuthi ulufune.
Ndonwabile ukunceda iindwendwe zethu ngazo naziphi na iimfuno ezinazo, ndifumaneka ngo-whatsapp imini yonke, kwaye ndihlala ndikwiofisi yethu kwisakhiwo sezindlu ngexesha lasemini.…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Playa Carmen, Santa Teresa, Cobano